Barnaamijka Guulaystayaal Geeddiga Wadaay.Q:4-aad, Qalinkii:Aqoonyahan Rashiid Sulub Caalin. | Boorama Online Network
Barnaamijka Guulaystayaal Geeddiga Wadaay.Q:4-aad, Qalinkii:Aqoonyahan Rashiid Sulub Caalin.
November 19, 2016 | Filed under: TAHNIYADAHA | Posted by: admin
KU TOOSNOW MAAMUL WANAAGGA
Qalinkii::Rashiid Sulub Caalin Email:sulub2007@yahoo.com Tel:0634426781 / 0659746679
Marka ugu horraysa waxaan Ilaahay ka baryayaa in abaarahan soo noq-noqonaya Ilaahay inaga kor qaado, oo uu Ilaahay ina waafajiyo dedaalkii, aqoontii iyo kartidii aynu kaga bixi lahayn abaarahan oo xal waara loogu heli lahaa iyaga iyo dhibaatooyinka kale ee ina haystaba.
Ugu horrayn, waxa is waydiin mudan odhaahda tidhaahda ‘waligii woqooyi dowladnimo baran maayo’ oo loola jeedo ‘Isaaq’. Waa odhaah aan waligay maqli jiray ee da’yartaay maaha mid aan anigu sameeyey, sababta odhaahdaasi waxaan odhan karaa, markii la darsay inaynu ka haajirnay oo ay ka tageen dantii guud ee inaga wada dhaxaysay. Taasina waxay ina dhaxalsiisay, in maamul wanaaggii ummadda lagu hagi lahaa meesha ka baxo. Markii dambana natiijadeedii ay noqotay masiibooyin inagu habsada oo jiritaankeeniiba khatar weyn ku haya imika.
Haddaba waxay tahay su’aashu maxaynu u xoornay dantii guud ee lagu aflixi lahaa? Jawaabteeda badankeenu waynu garanaynaa oo waxa weeyi :
waxaynu ka hadhi wayney qabyaaladdii inala degtay ee dhib mooyee wax kale aan inoo lahayn.
Badankeenu u heelanaantii danta guud waxaynu ku doorsannay in aynu miciinsanno si caqli gaabni ah dan shaqsiyeed, mid reereed, mid kooxeed, xasad, kursi jaceyl, xatooyo xoolaha dowladda ah, kala dambayn la’aan, is xaqiraad iyo is reebitaan.
Balwadaha qaadku ugu horreeyo oo sida wabiga inoogu soo fatahay, oo khatartiisu maalinba maalinta ka dambaysa ay sii laban-laabmayso, taasi oo da’yarteenii baabi’isay.
inagoo ka gaabinay in maskaxdii iyo dhaqankii ubadkeena aynu kobcinno oo aynu dhisno, isla markaana aynu hagrannay inaynu nolosha ka sii horraysa jiilasha soo socda iyo kuwa joogaba aynu ahmiyad weyn siino u diyaar garaynta nolosha iyo ku samirka dhulkooda.
In aynu isku maaweelino oo aynu indhaha ka qarsanno mid kaliya mooyaane tiirarkii uu waddanku ku dhismi lahaa, oo aynu nabad uun kala soo baxno, oo aynu dayacno wixii ay nabaddu ku taagnaan lahayd sida shaqo abuur I.W.M.
Qodobadaas iyo kuwe kaleba waxaan filayaa inaad igu waafaqi doontaan, in ka haajiritaanka hareero-wada-qabsiga danta guud aynu u mudanay dhibaatooyin fawqal caqli ah, inagoo awooddii Alle ina siiyey aan waxba uga faa’iidaysan. Taasina ay keentay inaynu doorano maamul xumo kana doorbidnay maamulkii wanaagsanaa ee caamka ahaa.
Haddaba, waxaan caddaymo u hayaa in ‘Isaaq’ waligii aanu dowladnimo baranaynin kuna dhaqmayn. Waxaanan hayaa caddaymo gaadhay ilaa 100 qodob, oo aan rajaynayo in aan dadweynaha gaar ahaan beesha aan magacaabay oo aan ka mid ahay aan u soo bandhigo intii aan ka gaadhi karo, aynu ku faraxno amma aynu ka cadhoonee. Ujeeddaduna maaha is ceebayn, laakiin waa in wax lagu qaato oo la saxo khaladaadka jira, waa haddii aan si kale oo qalloocan loo turjumin sidii uu abwaankii waynaa ee Tima-cadde yidhi ‘hadaladda aad ula hoos kacdo ayey haaf ka dhigayaane’.
Sida aynu ogsoonnahay, waxa ina soo food saaray doorashooyinkii loogu tartamayey Madaxweynaha iyo Golayaasha oo ku sii xiga Somaliland. Doorashadaas waxa ku tartamaya 3 xisbi oo kala ah Waddani, Kulmiye iyo Ucid. Waxaana aynu hore u qaadanay in nidaamkan xisbiyada lagu soo baxo hoggaanka dalka cidda qabanaysa. Waxaana la rabaa inay noqoto doorashadaasi mid xalaal ah oo xor ah, waxaana lama huraan ah, in danteena guud ay ku jirto in doorashooyinkaasi maraan hab ku dhisan maamul-wanaag oo la isla waafaqsan yahay si loo xaqiijiyo wanaag iyo guul laga gaadho habka dimuqraadiga ah ee aynu qaadanay.
Qodobka ugu horreeya ee aan idiin soo bandhigayo, ee aan u daliishanayo barasho la’aanta maamul-wanaagga waxa weeyi;
In asxaabtii doorashada gali lahayd ay marin habawday, waayo waqtiyadan dambe waxay kaliya ee ay ku mashquulsan yihiin mujtamacii, oo aynu ahmiyad weyn siinay, kanaa ka baxay xisbigaas oo wuxuu ku biiray xisbi hebel. Taasi oo aanay micno weyn samaynayn kanaa ku biiray iyo kanaa ka baxay xisbi hebel.
In aynaan ka dalban asxaabta qorshe xisbiga u yaalla waxqabadkooda inay inoo soo bandhigaan haddii ay guulaystaan.
In aynaan ka dalban inay xisbiyadu inoo soo gudbiyaan dhaqanka, taariikhda iyo mabda’a ay leeyihiin madaxda sar-sare ee xisbiyada hogaaminaysa dalka.
In waqti iyo maal aad u badan lagu bixiyo dhabar ka jabinta xisbiyadda kale ee la tartamayo, halka ay xoog saari lahaayeen qancinta iyo soo jiidashada taageerayaasha. Taasina la fahmi karo natiijo xumadeeda.
In aynaan maalmo iyo saacado badan ka fakarin, oo aynaan is waydiin cidda aynu dooranayno iyo sababta aynu u dooranayno.
Sida aynu ogsoonahay ololayaasha xisbiyada ee abaabulkeedu uu noqday carruur iyo hablo yar-yar oo basas loo kireeyo oo suuqyada lagu soo wareejiyo, halkii dadkeena kuwa dhexe iyo kuwa waa weyni ay doodo iyo fikir cilmi ku salaysan lagu samayn lahaa madaxda xisbiyada.
Intii doorasho ee la soo maray waxa xaqiiq ah in si qaldan loo adeegsaday hantidii dowladda, oo cid gaari ku adeegato cashuurtii iyo shilimaadkii laga soo ururiyey shacabka iyo dheefta ka timaadda kaalmada aynu waydiisano beesha caalamka.
Waxa jira dhaqn xun oo dibo socod ah oo soo baxay intan danbe,kaasi oo ah in Doorashooyinkeena lagu soo khatimo MUDDO KORDHIN,waa halka reer Xamar ka odhan jireyn WAA DHEESHEENA! Taasi oo ina dhaxal -
siisa in ay fart dhexda ka qaniinan ciil awgii cidii haweysaneysay in ay maalin xukunka qabtaan,gaarahaan dhalinrada,kuwaa taageerada bixinayay ay inoo qaatan kuwo aan lagu magacaabo FULEYDII CUDURDAARAYAAL MA WAAYAAASHa AHAA!
Qodobadaasi iyo kuwe kale waxay tusaale u noqon karaan tii aan horay u soo sheegay ee ah ‘Isaaq waligii dowladinimo baran maayo ku salaysan dowlad wanaag la wada manaafacaadsado’ ma runbaa mise waa been in aanu waligii baranayn maamul wanaag iyo raacitaanka danta guud ee dowlad wanaag ku iman karo.
F.G: waxa la is waydiin karaa Isaaq maxaa qoraagu u soo qaatay?
1. Waxaan u soo qaatay, waxa muhiim ah dadka aan ka dhashay marka hore inaan ka bilaabo toosintooda.
2. Rajo ka qabkayga in Isaaq u noqon karo Soomaalida kale kuwa u bilaaba wanaag oo lagaga dayan karo.
3. Boogaha aan sheegay oo u baahan daawooyin deg-deg ah.
4. In aynaan isku qancin tub qaldan oo aynu wax iskaga sheegno I.W.M
5. Inaynu ka baxno dhayalsiga, hagrashada iyo diciifnimada danaheenii guud inaga dabray.
6. Inaynu u soo noqono Ilaahay, oo la raaco wanaagyada uu inoo sheegay.
7. Se waxa jira qodobo aynu kaga duwanahay beelaha kale oo ay ka mid yihiin,in aynu ku fiicanahay in aynu tanaasul isku sameyno marka qadiyad la isku mari waayo sida Doorashooyinka oo kale iyo inagoo sida ay runtu tahay aynan sameynin qorshaayal u kaca ah oo beelaha kale lagu hagardaameyo ama faldanbiyaadyo waxyeela ah iyo inaga oon aqoon Aargoosiga.ALleh baa mahad leh
Qalinkii: :Rashiid Sulub Caalin Email:sulub2007@yahoo.com Tel:0634426781
© 2017 BooramaOnline.Com. All Rights Reserved